Sadio Mané oo kaftamaya “hadda kaddib keliya waxaad iigu yeertaan Ronaldo” – Gool FM
Sadio Mané oo kaftamaya “hadda kaddib keliya waxaad iigu yeertaan Ronaldo”
(Liverpool) 02 Maarso 2019. Laacibka kooxda Liverpool Sadio oo lambar 9 ka ciyaarayay ciyaartii Arbacadii ay Liverpool 5-0 kaga adkaatay Watford ayaa isagoo la kaftamayay asxaabtiisa waxa uu yiri “hadda kaddib wxaad iigu yeertaan Cristiano Ronaldo”.
Firmino ayaa dhaawac kaga maqnaa Liverpool, waxaana tababare Jurgen Klopp uu kulankii Watford Mané ka codsaday in uu khad dhexe/weerar ahaan u ciyaaro, taasoo xidigga reer Senegal ka aqbalay.
Mané oo wareysi siiyay ‘Sky Sports’ ayaa waxa uu yiri “Markaan dhabta ka hadlo aad baan ula yaabay, weli qaabkaas uma ciyaarin dhex-weerar ah maantaa ka hor, tababaraha ayaa ii sheegay in uu xoogaa jadwalka beddelayo, wuxuuna I yiri Sadio adigu waxaad ciyaareysaa lambar 9”.
“Waxaan iri ‘Ah!’ waxaana eegay saaxiibadeyda oo wada qoslaya, waxaan iri waxaan nahay koox, waana inaad I aamintaan, waxaana u raaciyay iyagoo igu qoslaya ayaana ku iri ‘maanta laga bilaabo waa inaad Ronaldo iigu yeertaan”. Ayuu sii raaciyay Mané.
Waxay saaxiibada Mané ugu jawaabeen “waa inaad gool dhalisaa, haddii aad gool dhaliso waxaan kuugu yeereynaa Ronaldo, haddii aad dhalin weysana qashin ayaad tahay, nasiib ayaana lahaa oo waxaan dhaliyay laba gool, waxba kama qabo, aad ayaana ugu faraxsanahay inaan ka ciyaaro boos walba oo uu tababaruhu u baahdo”.
Labada gool ee Mané ayaa waxaa ku jiray mid uu cirib gadaale kaga dhaliyay Watford daqiiqaddii 19-aad.
Tababaraha Kooxda Manchester City Guardiola oo sheegay inay afar ciyaartooy soo iibsanayaan xagaagan
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Manchester United Vs Southampton